दाँत पहेंलो भयो?यो उपाय अपनाउनुहोस् … चम्किछ दाँत! |
काठमाडौं । मानिसको व्यक्तित्वलाई मुस्कान तथा हाँसोले आकर्षक बनाउँछ । मुस्कान तथा खुलेको हाँसोले सकारात्मक ऊर्जाको प्रवाह गर्छ । मुस्कान तथा खुलेको हाँसो तब राम्रो हुन्छ, जब दाँत सुन्दर देखिन्छन् । दाँत नमिलेको हुनु, पहेंलो हुनु आदि कारणले मानिसहरु खुलेर हाँस्न सकिरहेका हुँदैनन्।दाँतको पहेंलोपना हटाउनको लागि विभिन्न विधिहरु बजारमा उपलब्ध हुन्छन् । तर ती विधिहरु खर्चालु हुन्छन् भने दाँतलाई नकारात्मक असर गर्ने पनि हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा घरेलु विधिलाई अपनाउन सकिन्छ । घरेलु विधिमा आफ्नो घरमा सहजै पाइने सामानहरुको प्रयोग गर्न सकिन्छ भने कम खर्च पनि हुन्छ।
घरेलु विधिले दाँतलाई नकारात्मक असर गर्दैन । यस विधिलाई आफूले चाहेको समयमा कसैको सहयोग बिना नै प्रयोग गर्न सकिन्छ। दाँतको सफाई तथा मजबुतीको लागि बजारमा थुप्रै दन्त मन्जन उपलब्ध छन् ।ती मध्ये आयुर्वेदिक दन्त मन्जनलाई पहेंलो दाँतलाई सेतो बनाउनको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ । उक्त दन्त मन्जनमा बेकिंग पाउडर र कागतीको रस राखेर मिलाउनुपर्छ । एक पटक प्रयोग गर्नको लागि थोरै, चनाको एउटा दाना जति नै मन्जन निकाल्नुपर्छ र त्यसमा त्यति नै बेकिंग पाउडर र थोरै कागतीको रस मिलाउनुपर्छ ।
घरबाट कलेज जान निस्किएकी युवती बाटोमा मृत भेटिन!
महिनावारी ढिलो गराउन चाहानुहुन्छ ? अपनाउनुस् यी ८ प्राकृतिक तरिका